Tsiambaratelo momba ny famokarana: Tsy teknika foana ny teknolojia | Martech Zone
Tsy maintsy ekeko fa ny litera efatra TECH dia manome ahy ireo mangovitra. Ny teny hoe "teknolojia" dia teny mampatahotra. Isaky ny maheno azy isika dia tokony ho matahotra na ho talanjona na ho faly. Mahalana isika vao mifantoka amin'ny tanjon'ny haitao: manala ny fahasarotana amin'ny fomba hahafahantsika mahavita bebe kokoa sy miala voly bebe kokoa.
Teknolojia fampahalalana fotsiny
Na dia ny teny ny teknolojia dia avy amin'ny teny grika téchnē, izay midika hoe "asa-tanana", amin'izao andro izao izay saika resahintsika matetika teknolojian'ny fampahalalana. Ireo mpamaky an'i The Martech Zone dia tototry ny fitrandrahana maro amin'ity saha ity. Manipy ny fanafohezana toy ny URL, SEO, VoIP ary PPC izahay. Izahay dia manao fampitahana marobe amin'ireo vokatra, serivisy ary indostria samihafa izay toa tsy misy ifandraisany. Ny tontolon'ny teknolojia dia feno jargon be loatra ka tsy azo atao mihitsy ny mahatakatra izay lazain'ny olona amin'ny fihaonambe. Mampatahotra olona sasany ny filazanao hoe "teknolojia" ianao.
Eo anelanelan'ny haitao sy teknolojia
Misy tontolo iray mampiavaka ny teknolojia sy ny teknika. Ny teknolojia dia fampiharana azo ampiharina amin'ny hevitra siantifika mba hamokarana vokatra mahasoa na mahaliana. Ny lafiny teknika dia ny antsipiriany marobe izay mampandeha ny teknolojia. Hanazava: Zava-dehibe izany olona haiko ny mamantatra ny olan'ny motera ao anaty fiara, fa raha te hankafy ny haitao fiara dia tsy mila mekanika ianao.
Ka inona no mitranga? Ity ny teoria ananako:
Faly tsy mahalala
Tany am-piandohana, tsy misy amintsika manana hevitra momba izay hiseho manaraka. Ary indray andro, BAM, henonao fa Google, ny Tambajotra Sakafo ary ny Komity Olaimpika Iraisampirenena dia mivondrona hamorona tambajotra sosialy amin'ny Internet ho an'ny fambolena arugula mifaninana
Tsy mahagaga raha tsy mividy zavatra avy hatrany isika. Marina ve? Inona no hataoko amin'ny fitaovana tsy manana kitendry? Manontany tena isika maninona aho no mila masinina mampiasa tenim-batana handefasana hafatra an-tsoratra ho ahy?
Ireo fanontaniana ireo, na izany aza, dia mitaky fahatakarana ara-teknika kely. Tokony farafaharatsiny farafaharatsiny mba haka sary an-tsaina ny tenantsika amin'ny fampiasana ny haitao vaovao, ary manana fahatsapana ny fomba mety hiasa amin'ny fiainantsika manokana.
Fahalalana na tahotra
Rehefa mihabetsaka ny haitao iray dia sendra sendika iray amin'ny arabe isika. Na vitantsika izany azoko amin'ny flash hita (Oh! Afaka manaraka ireo namana taloha ao amin'ny Facebook aho. Cool!) na tsy tena mikitika ao an-tsaintsika izany. Manomboka mandalo antsika ny teknolojia ary matahotra isika fa “tsy ampy saina” fotsiny isika ho an'ny tontolo manodidina antsika.
(Tsy sary: ​​teknolojia azontsika fa tsy miraharaha. Ohatra, fampiharana iPhone izay mitabataba amin'ny vatana.)
Adoptera ho an'ny manam-pahaizana
Indraindray isika dia manjary mahay tsara amin'ny antsipirian'ny teknikan'ny teknolojia vaovao, ary tianay ny manavaka azy io ary mampiseho ny fahaizantsika. Rehefa manoratra ity lahatsoratra ity ho an'ny The Martech Zone, Vitako izany amin'ny HTML manta ary manampy ny marika fanamarihako manokana. Ny fahaiza-mitantana ara-teknika dia fahafinaretana, satria manam-pahaizana manokana amin'ny fanaovana izany aho.
Mankany amin'ny fahaiza-manao
Indraindray isika dia lasa mahay tsara amin'ny haitao, mahafantatra tsara fotsiny hahalala ny fomba hahazoana. Mety tsy tena azonao ilay izy Ahoana no mandeha ny efijery mikasika, fa miaraka amin'ny fampiharana kely sy ny fampiononana dia afaka miaraka ianao amin'ny fampiasana azy tsara.
Mankany amin'ny faharesena
Indraindray ny teknolojia dia toa sarotra be ary mandalo antsika. Io no tena manahirana indrindra amin'ny toerana rehetra, satria sarotra ny manampy olona iray hahafantatra fa raha mba azony kely fotsiny ny antsipirian'ny teknika (toy ny fahasamihafana eo amin'ny boaty fikarohana sy ny barairesy) dia ho tsara kokoa izy ireo.
Fantaro fa ny olona rehetra mihaona aminao dia amin'ny toerana sasany eo akaikin'ny Tabilao momba ny Teknolojia ho an'ny gizmo, rafitra na gadget vaovao.
Ampio izy ireo handroso amin'ny lalana tiany haleha (mankany amin'ny fahaizana na fahaizana), tsy ilay tadiavinao.
Mamolavola fanentanana momba ny haitao sy marketing miaraka amina andraikitra tsirairay ao an-tsaina. Tsena ny toerana misy azy ireo, fa tsy amin'ny toerana tokony hiheveranao azy!
Inona ny hevitrao? Moa ve ny olona miaina ny làlana aseho amin'ny Tabilao momba ny Teknolojia?
Tags: mandanyfahasambaranafahaizanafaharesenabaovaomanam-pahaizanatahotratsy fahalalanafamokaranafisalasalanateknikafahalalana teknolojia
Ny birao, ny adiresy, ny marika